Serivisy - Chinatown Grain Machinery Co., Ltd.
Namolavola milina sy vahaolana teknika isan-karazany izahay ho an'ny varotra, menaka fihinana ary fikarakarana sakafo, toy ny fanangonana, fitehirizana, fanadiovana, fanoratana, sieving, fikolokoloana, fifangaroana, famokarana, famolavolana endrika, ary fanangonana.
Amin'ny maha mpamatsy vahaolana indostrialy matihanina anay dia manome mihoatra ny milina fotsiny izahay, fa vahaolana mahomby amin'ny famokarana izay afaka manatsara ny rojom-bidin'ny mpanjifa. Mandritra ny fivoarana dia tsy raharahiantsika velively ny olana sy ny vintana hanamorana ny vokatray, ary izany no ahafahantsika mitazona ny toerana misy anay eo amin'ny sehatry ny asa.
Ny masininay dia be mpampiasa amin'ny mpampiasa an-trano maro. Ary ireo tetik'asa fanaovan-tsika sy fitaovana tokana dia naondrana tany Thailand, Birmania, Aostralia, Sri Lanka, Italia, Alemana, Silia, Arzantina, Brezila, Okraina ary firenena sy faritra 20 mahery. Mpanjifa marobe eran'izao tontolo izao no nitsidika ny orinasanay tamin'ny asa aman-draharaha. Miarahaba fatratra ny mpanjifa izahay ary nanome vahaolana tena tsara miaraka amin'ny fitaovana tsara kalitao sy serivisy teknika ary nahazo fankatoavana ambony avy amin'izy ireo izahay.